Indlu ethandekayo uAthy Kildare,
Igumbi elikhulu lokulala elinye. Imizuzu emithathu uhamba ukusuka kwisikhululo sikaloliwe esisebenza eDublin, eWaterford, kwicork (isikhululo sikaloliwe saseHeuston). Ibekwe kwimizuzu emihlanu ukusuka kwidolophu ephithizelayo yase-Athy.Kwakhona nohambo oluhle lomsele. Isiseko esifanelekileyo sokuphonononga i-ireland, iihambo zemini njl.njl. Ubom bobusuku obuhle, ii-pubs ezininzi, iivenkile zekofu kunye neendawo zokutya. Imizuzu emibini uqhuba ukusuka kwihotele edumileyo yaseClonard. Ifanelekile kwihotele egcwele kakhulu. Ipaki entle ngaphaya kwendlela. Ubumfihlo obuqinisekisiweyo kwindawo ezolileyo kakhulu. Indawo yemoto ekhoyo.
Indlu ethandekayo kumgama nje o-3 km ukusuka kwihotele yaseClannad Court e-Athy kwaye ngaphantsi kwe-1km ukusuka kwisikhululo sikaloliwe sase-Athy. Indawo yokupaka iyafumaneka kwi-complex. Kukho igumbi lokulala eliphindwe kabini kunye nebhedi yesofa kwigumbi lokuhlala yokulala 2.
Kukho ikhitshi evulekileyo evulekileyo / igumbi lokutyela / igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlambela. Ligumbi elithandekayo elitofotofo elinekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo.kwanebhedi enye kwi-T Bedroom.Ikhefu elifanelekileyo.
Ipaki ethandekayo ngaphesheya kwendlu. Idolophu ephithizelayo yaseAthy yimizuzu emihlanu kuphela yokuhamba. Iindawo zokutyela ezininzi kunye neendawo zokutya.
I’m a friendly Honest Helpful Person,
Ndihlala ndifumaneka kwifowuni okanye kwi-imeyile.